CAALAMKA FESTBAX FARIBAULT – Bogga Hoyga
ISKU XOOGAN. ANAGU KUNNAH.
CAALAMKA FESTBAX FARIBAULT
Bandhigga Caalamiga ah ee Faribault waa munaasabad caalami ah oo u eg suuq-ganacsi oo ay ka muuqdaan cuntooyin, muusig, dhaan, bandhigyo iyo noocyo alaab adduunka ah. Qaar badan oo ka mid ah waxay ka yimaadaan dadka deegaanka, dukaamada iyo waratada. Kaalay sahaminta cuntada, farshaxanka, iyo qaab dhaqameedka adduunka.
Bandhigga Caalamiga ee Faribault 2020 wuxuu ahaa guul aad u weyn! Jawigu aad buu u fiicnaa, waxaan haysannay in ka badan 40 waab oo leh cunno, farshaxanno & farshaxanno, macluumaad iyo in ka badan. Jilayaal aad u wanaagsan, iyo ka soo qeybgal ballaaran maalintii oo dhan (iyadoo aan waligood la helin wax ka badan 250 qof sida ku xusan xaddidaadda Covid-19).
Fadlan halkan ka daawo fiidiyowga dhacdada – mahadnaqa Faribault Community TV iyo Troy Temple.
Indhahaaga ka saar boggan maaddaama aan mar horeba ka fikirayno xuska 2021. Waxa kale oo aad aadi kartaa Facebook ama ama “like” bogga “Faribault Diversity Coalition – FDC” ama waxaad ku biiri kartaa kooxda “Faribault Diversity Coalition”. Si kastaba ha noqotee waxaad si otomaatig ah u heli doontaa cusbooneysiintayada.
Mutadawiciinta xafladaha ayaa ku dhow inay dhaqangeliyaan kala fogaanshaha bulshada iyo xirashada maaskaro.
Dhammaan meelaha la fadhiisto ee dadweynaha waxaa lagu nadiifinayaa saldhigyo joogto ah.
Waxaan xoojin doonnaa xaddiga 250 qof ee isu imaatinnada bannaanka.
Nadiifiyeyaasha gacanta ayaa la dhigi doonaa dhammaan aagga xafladda.
Dhammaan kaqeybgaleyaasha xafladda (maahan dadka soo booqda) waxaa laga baari doonaa heer kulka waxaana laga codsan doonaa inay baxaan haddii ay ka sarreeyaan 100.3 darajo.
Copyright © 2021 Bogga Hoyga	– OnePress theme by FameThemes